PROFESSOR GEEDI : BEESHA CAALAMKU WAXAY LA SHAQEYNAYSAA DAWLADDA FEDERAALKA SOOMAALIA !
Nairobi,10ka September 2005
Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geedi ayaa ku tilmaamay been aan raad lahayn warar loo nisbeeyay in laga soo xigtay doraad kulan ay ku yeesheen Muqdisha xidhibaano ka tirsan labada gole oo Baarlamaanka iyo Xukuumadda, taas oo ku xiriirsanayd xaaladda ka jirta caasimada ee ku wajahan xaruunta kmg ah ee Dawladda ee Magaalada Jowhar.
" Wax xiisad ah oo ka jirta Muqdisha iyo jowhar midna ma jirto , cid ku kulantay Muqdisha oo aan ka warqabo ma jirto, ciidan abaabul oo laga wado laba magaalane ma maqlin, cid ka soo baxday dalka oo aan la socdana ma ogi " Sidaas ayuu sheegay Prof. Cali Maxamed Geedi, mar uu shalay ugu waramayay magaalada Nairobi Weriye Axmed Idaa-Waqaca .
Beesha Caalamka iyo Ururada Dawliga ahba waxay la shaqeynayaan, oo ay taageerayaan shacabka iyo dawladda KMG ah ee Soomaaliya, ayuu raaciyay hadalkiisa Prof. Geedi, isagoo sii carabaabay inay nasiibdarro tahay maanta xubno isku sheegaya inuu ka tirsan yahay dawladda inay ku baaqaan inay dalka ka baxaan Hay'adaha Dawliga iyo Diploomaasiyiinta u yimid u-gargaarka shacbka Soomaaliyeed.
Siyaasadda Dawladdu waa aas-aaska ciidamo qaranku leeyahay oo suga nabadgelyada,soona celiya kala danbeynta dawladnimo. Gobolada dalka oo dhana waa ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha ciidamada qaranka, ayuu ku soo gebegebeeyay hadalkiisa Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Prof. Cali Maxamed Geedi .